UFrank Yerby. Iincwadi ezigqwesileyo zombhali wenoveli waseMelika | Uncwadi lwangoku
UFrank Yerby. Ezona ncwadi zibalaseleyo zombhali wenoveli waseAfrika
UFrank Yerby yayithandwa Umbhali wase-Afrika waseMelika, umbhali weenoveli zombini zothando njengaye zembali. Ukuhlala eSpain ukusukela phakathi kwiminyaka yama-50, wasweleka eMadrid usuku olunje namhlanje 1991. Ngokuqinisekileyo sonke sinesihloko sakho ezishelfini ekhaya, ke Ndiziphonononga ezinye zeencwadi zakhe ukukhumbula.
1 UFrank Yerby
2 Umsebenzi wakhe
2.1 Ngelixa umzi ulele
2.2 Ukuhleka kukaMtyholi
2.3 Umfazi obizwa ngokuba ngumcabango
2.4 Umtshakazi wenkululeko
Era kamama omhlophe notata omnyama kwaye wazalelwa e 1906 ngo-Augusta, Georgia. Waqala ukupapasha kwezinye zezona magazini zibalulekileyo zenkcubeko ezinje nge Umagazini kaHarper, kwaye ndaphumelela amabhaso. UKUYA yerby Uthathwa njengombhali wokuqala wase-Afrika-waseMelika ukuba athengise e-United States. Ukuhamba ne Ngelixa umzi ulele.
yerby ushiywe ungene 1955 ngokukhalazela ucalucalulo kwilizwe lakhe kwaye wagqiba kwelokuba eze España, apho ahlala khona waqhubekeka nomsebenzi wakhe wokubhala. Wajongana nemixholo eyahlukeneyo kwaye ekuqaleni kweminyaka yama-70s wathatha ezo zobuhlanga kunye nembali yamakhoboka aseAfrika kwilizwe lakhe lokuzalwa.
Uye wema ngaphandle amaxwebhu anzulu iinoveli zakhe, kodwa wayethanda ukungaziwa kwaye kunqabile wanika udliwanondlebe. Wayengumbhali owaqala umsebenzi wakhe wokupapasha indlu. Usweleke eMadrid kwaye wangcwatyelwa kwingcwaba elincinci lika Amangcwaba aseLa Almudena, njengoko kuceliwe ngokucacileyo.
yerby uphumelele kwaye waba yinkosi yenveli yezembali ngexesha apho lalingekabikho kwifashoni. Babo contact, nangona nge kwangaphambili kumazantsi eUnited States phakathi koqhushululu kunye neMfazwe yamakhaya, babephantse ngaphezulu kwawo onke amaxesha: imfazwe ye Peloponnesus, i Amaxesha aphakathi, la Uvukelo lwaseFrancekwelakwaYuda likaYesu Kristu ... Kwilizwe lethu Iinoveli ezimbini ezinikezelweyo, Ukunuka ubungcwele, kwi-Islamic Spain, kunye Una wavuka for Ana María, kuTshintsho.
Ngelixa umzi ulele
Incwadana ivula ngendoda eshiywe phakathi kwindawo engekho kwi-Mississippi enkulu, ebizwa UStephen fox, WaseIreland, onokuthi abonakalise ngokugqibeleleyo ukugqibelela umphambukeli esekwe eMelika, eyintandokazi ngaphezulu kweMexico okanye isiTaliyane. Akukho nto, kwaye ngoncedo oluthile lwethamsanqa kunye nobuchule bakhe kumakhadi, uyaphatha Yakha ifama kunye nendlu enkulu ngazo zonke iintlobo ze iziganeko eziyiliweyo kumgca wembali osuka ku Ngo-1826 ekupheleni kweMfazwe yombutho.
UJean, Unyana osisityebi ongumnini-nqanawa waseMarseille, ngu umchasi ozimiseleyo yoluntu ahlala kulo. Ohloniphekileyo wathembisa udadewabo uwela indlela yakhe kwaye Ukuphanga isithandwa sakhe. Kodwa xa uJean efuna ukuziphindezela, ukwazile ukuthandana nodadewabo osisidwangube. Kwangelo xesha, uJean uya kuba lingqina kunye nomlinganiswa ophambili we Uhlaziyo ulinde ixesha elide, kodwa uza kuphoxeka.
Umfazi obizwa ngokuba ngumcabango
Kunye nababhinqileyo ophambili, Isixelela ibali likaFancy, Intombazana entle kakhulu, ubukrelekrele obukhali kunye nokuqina okukhulu. Kodwa xa ujongene ne umtshato ohleliweyo ngenxa kayise, uyabaleka ekhaya. Ukufika e Augusta, kwi imeko yomdaka ka-1880, baninzi abaphathi bezinyathelo abeza kwinqanaba, kodwa uFancy kuphela ndithandana neNkundla, oza kutshata naye emva kokoyisa ubunzima obuninzi kwaye silwe nocalucalulo oluninzi.
Ngasezantsi kwe Imfazwe yaseMelika yeNkululeko, U-Yerby uxube apha iinyani kunye namanani embali anje George Washington kunye nabanye abaninzi ngentsomi yebali eneenkwenkwezi ezimbini oodade uKathy noPolly Knowles. Zombini, ezahluke kakhulu kubuntu, zinjalo uthandana nendoda enye: U-Ethan Page, umxhasi wenkululeko yabantu bakhe kwaye akulungeleyo ukuyifela.
UKathy uyinjakazi odlala omnye komnye ngokweemfuno zabo. Kodwa UPolly ulandela uEthan kumabala emfazwe, emnceda kwiingozi kunye kumsindisa ekufeni amatyeli aliqela, nokuba uyazi ukuba xa imfazwe iphelile, u-Ethan uqinisekile ngokujonga emva kuKathy.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UFrank Yerby. Ezona ncwadi zibalaseleyo zombhali wenoveli waseAfrika
UPedro Muñoz Seca. Eyona ntle yokuphindezela kukaDon Mendo